“ချစ် သော ကေ” – အ ပိုင်း ( ၅ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “ချစ် သော ကေ” – အ ပိုင်း ( ၅ )
“ချစ် သော ကေ” – အ ပိုင်း ( ၅ )
Posted by aye.kk on Jul 10, 2012 in Copy/Paste |7comments
စစ် တု ရင် က လက် ရည် တူ နေ ပါ သည် ။
နှစ် ယောက် သား အ နိုင် မ ခံ အ ရှုံး မ ပေး နိုင် ကြ ပဲ ၊ ဆော့ နေ ခြင်း ဖြစ် ပြီး ။
အစ် ကို သု ခ က ပို ဆိုး ပါ သည် ၊ ကေ့ ဓါတ် ပုံ ပြန် ပေး ရ မှာ ကြောက် သ ဖြင့် ၊ ကေ့ ဘက် က ဘု ရင် မ အား အ ယင် ကျ ရှုံး အောင် နည်း ပေါင်း စုံ ဖြင့် တိုက် ခိုက် ပြီး ၊ တိုက် ကွက် များ ပြောင်း ခါ ၊ အ လဲ ထိုး နိုင် ရန် ကြိုး စား နေ ပါ သည် ။
ကေ လည်း ပွန်း နှင့် မြင်း ကာ ရံ ခါ ၊ ရ ထား ထုတ် သုံး ပြီး ကာ ကွယ် နေ ရ ပါ သည် ။ နောက် ဆုံး နှစ် ပွဲ သ ရေ ကျ ပြီး ၊ အစ် ကို သု ခ က တစ် ပွဲ ကပ် နိုင် သွား ပါ သည် ။
ဓါတ် ပုံ က ပြန် မ ရ ၊ ရှုံး သ ဖြင့် ဓါတ် ပုံ အ ကြောင်း က ပြော ပြ ရ ဦး မည် ။
အစ် ကို သု ခ ရေ ….
ဒီ ဓါတ် ပုံ က ပု သိမ် ဒီ က ရီ ကော လိပ် ရှေ့ က မျက် ခင်း ပြင် မှာ ရိုက် ထား တာ ပါ ။
ဖေ ဖေါ် ရီ လ ( ၁၂ ) ရက် ၊ ပြည် ထောင် စု နေ့အ တွက် ၊ အ ကောင်း ဆုံး ဓါတ် ပုံ ပြိုင် ပွဲ ဆု ပြု လုပ် တော့ ပု သိမ် ဝင်း ချစ် က ဝင် ပြိုင် ခဲ့ တဲ့ ဆု ရ တဲ့ ပုံ လေး ပါ ဘဲ ။ ထောင့် ကိုး ရာ ခု နှစ် ဆယ့် ရှစ် ခု နှစ် က ပါ ။
အ လှ ရိုက် ခံ ရ တဲ့ ဓါတ် ပုံ တွေ အား လုံး ၊ ဦး လေး က ပု သိမ် ဝင်း ချစ် ဓါတ် ပုံ တိုက် က ရွေး ယူ ခဲ့ ပြီး အ ဖေ့ လက် ထဲ အပ် တာ ဆို တော့ ။ ကျန် တာ တော့ကေ လည်း ဘာ မျှ မ သိ ရ ဘူး ။ ဒီ ဓါတ် ပုံ နဲ ့ဆု ရ ခဲ့ တာ က လည်း ၊ ပု သိမ် တစ် မြို့ လုံး အ သိ လေ ။ ကေ့ ကို ညာ ထား မ ရ မှာ စိုး လို ့သာ ၊ ပြော ပြ ခဲ့ ကြ တာ ဒါ တောင် အစ် ကို သု ခ…. က ၊ ဒီ ဓါတ် ပုံ လေး ကို ကြံ ကြံ ဖန် ဖန် ရ လိုက် တာ က လည်း အံ့ ဩ လွန်း နေ လို ့ပါ။
ဓါတ် ပုံ သာ အ ရိုက် ခံ ရ တယ် ၊ ဖြူ သ လား မဲ သ လား တစ် ပုံ မှ လည်း မ ပေး ပြ ခဲ့ ကြ ဘူး ။ ဘာ ကြောင့် ဆို တာ လည်း မ သိ ဘူး ။ ဘာ ရည် ရွယ် ချက် တွေ နဲ ့လည်း ။ အ ခု အ ဒေါ် လက် ထဲ ရောက် နေ တာ လည်း တ ကယ် အံ့ ဩ ခဲ့ ရ တယ် ။ ဘာ ရည် ရွယ် ချက် တွေ နဲ့လုပ် နေ ကြ တာ လည်း ဆို တာ စဉ်း စား မ ရ အောင် ပါ ဘဲ ။
ကေ့ အ နေ နဲ ့က….
ဒီ ကိ စ္စ အ ဒေါ် ကို မေး ရ မှ ဖြစ် မည် ၊ သိ ရ မှ သာ ကျေ နပ် မည် ဟု ပြော လျှင်….။
အစ် ကို သု ခ ၊ တ ချက် မျှ ငိုင် သွား ပါ သည် ။
ကေ မ ကျေ နပ် လျှင် ဒီ ဓါတ် ပုံ တွေ ကို အ ရဲ စွန် ့၍ ဘီ ဒို ထဲ က ယူ ပေး ရ မ လား ……
အ ဒေါ် သိ လျှင် မိုး မီး လောင် တော့ မည် ။
ပို ဆိုး သည် က ဖြေ ရှင်း မ ရ နိုင် သော ကိ စ္စ တ ခု ၊ ပြ ဿ နာ ကြီး တစ် ခု ဒီ အိမ် မှာ မ ကြာ ခင် အ ကြီး ကျယ် ကျ ရောက် တော့ မှာ ပဲ ။
ခက် တာ က နှစ် ယောက် လုံး က လည်း ၊ ဆွေ မျိုး အ ရင်း တွေ ဆို ပေ မယ့် တ ကယ် တန်း ကြ တော့ ဧ ည့် သည် တွေ လေ ဟု ပြော ပါ သည် ။
အ ဒေါ် က ကေ့ အား ပြန် မ ပြော ပြ ရန် နှုတ် ပိတ် ခိုင်း စေ ထား မှု အား ၊ ဘာ အ တွက် ကြောင့် လည်း ဆို တာ ၊ အစ် ကို သု ခ က ကြို တင် အ ဖြေ သိ ထား နေ ပါ သည် ။
မ မေး စေ ချင် ရင် ပြော ပြ ပါ ။ အ မှန် ကို သိ ရ မှ ဖြစ် မှာ…. ။
အစ် ကို သု ခ အား…..
သိ ထား သ မျှ ပြော ကို ပြော ပြ ပါ ဟု ၊ အ ကြိမ် ကြိမ် အ ဖန် ဖန် အ ခါ ခါ တောင်း ဆို နေ မိ ပါ သည် ။
အစ် ကို သု ခ က လည်း…..
ဒီ အိမ် မှာ ပြ ဿ နာ ကြီး တ ခု မ ဖြစ် ပွား စေ ချင် ပါ ။
ကေ ဘာ ပြ ဿ နာ မျှ မ လုပ် လျှင် ….
အ ဒေါ် ဆီ က ကြား သိ ထား ရ သည့် စ ကား အား ပြော ပြ မည် ။
က တ်ိ ပေး ရန် တောင်း ဆို ပါ သည် ။
သိ ချင် သည့် စိတ် ကြောင့်…….
ကေ တ ယောက်…..
က တိ ပေး ပါ မည် ဆို သည့် စ ကား လွယ် လွယ် ကူ ကူ ထွက် သွား မိ ပါ တော့ သည် ။
ကေ အ သေ အ ချာ စဉ်း စား ပြီး မှ က တိ ပေး ပါ ကွာ…။
စ ကား ကို အ လွယ် ပြော တာ ကိုယ် က တ အား မုံး တဲ့ သူ ပါ…. ။
ဒါ ဆို ဘယ် လို လုပ် မှာ လည်း ..။
ကိုယ် နှင့် တိုက် ရိုက် ပတ် သက် နေ သည့် ကိ စ္စ ၊ ကိုယ် နှင့် သက် ဆိုင် နေ သည့် ကိ စ္စ ပါ ဟု ကေ မှ ပြန် ပြော မိ ပါ သည် ။
ကေ က အ သက် ဆယ့် ရှစ် နှစ် မှ မ ပြည့် သေး တာ ဘဲ…. ။
မိ ဘ တွေ အုပ် ထိန်း မှု အောက် မှာ ပြု သ မျှ နာ ခံ ရ မယ့် သူ လေ..။
ဥ ပ ဒေ အ ရ လည်း ၊ ကေ က လန် က ဆန် လုပ် ခွင့် မှ မ ရှိ သေး တာ ။
ကေ့ ကို ဘာ မှ လာ မ ရှင်း ပြ နဲ ့။
ဘာ မှ နား မ လည် ဘူး ။ သိ လည်း မ သိ ချင် ဘူး ၊ အ ခြား ဘာ အ ကြောင်း တွေ မှ လည်း မ သိ ချင် ဘူး ။ ကြား လည်း မ ကြား ချင် ဘူး ။ နား လည်း မ လည် ချင် ဘူး ။
အ ချစ် တော် ထား တဲ့ ကိ စ္စ တား မြစ် ပြီး ၊ ယော က်ျား လေး တစ် ယောက် နဲ့အ ဖေ့ ရိုး ရာ အ ရ စေ့ စပ် ပွဲ လုပ် ထား မယ် ဆို ပြီး နှစ် ဖက် မိ ဘ စီ စဉ် တာ သိ ခဲ့ ရ လို့ကုန် တင် လော် လီ ကား ရှေ့ ထဲ ပြေး ဝင် ပြီး ၊ အ သေ ခံ မယ် လုပ် ခဲ့ သေး တာ ။ အ ဒေါ် လည်း ဒီ ကိ စ္စ ကို ကြား သိ ထား မှာ ပါ ။
အ ခု လည်း အဲ လို ကိ စ္စ ဒု တိ ယ အ ကြိမ် ထပ် ပြီး ကြိုး စား ပြန် တာ လား …။
အ ဒေါ် နေ တဲ့ အ ခု တိုက် က ၊ အ ထပ် အ မြင့် ကြီး ….
ခုန် ချ ပြီး သေ ပြ လိုက် မှာ ….။
အား လုံး ယုံ သွား အောင် လေ…ဟု ၊ ကေ မှ အ ကြပ် ကိုင် စ ကား ပြော မိ ခဲ့ ပါ တော့ သည် ။
အန်တီအေးကေ စိတ်တော်၂ကြီးတာဘဲ ။ စနေသမီးဘဲ ဖြစ်ရမယ်ဗျား ။
ထင်ဒယ် ထင်ဒယ် ဂလိုဘဲဖြစ်တော့မယ်လို့။ ၄ပိုင်းမြောက်ထိ ကောင်လေးကဘဲ သဲသဲလှုပ်နေသလိုခံစားရတယ် ကောင်မလေးက ဒီလောက်မဟုတ်ဖူး။ ဒီတခါလဲ ကွဲပြန်ဘီထင်တယ် အာဟိ ;)
”ကေ” ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက စိတ်ကလေးကကြီး….”ကိုသုခ” ကလည်း ခုထိအားမရလှဘူး..
(ချဉ်းကပ်နည်းက ” ဦး” လောက်တောင် မတော်ဘူး..း)…)..ဒါပေမယ့် သူက အသားယူ
တတ်တာတော့ အချိန်တိုလေးအတွင်း ”ဦး”ထက် အတော်မြန်…အပိုင်း(၆)ကတော့ ဇာတ်ရှိန်
စစ်တုရင် ထိုးတယ် ဆိုကတည်းက ဉာဏ်ပြေးတဲ့သူ ဖြစ်ရမယ်။
မအေးရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေက တမျိုးဆန်းတယ်နော်။
ဇာတ်သိမ်းတော့ ဘယ်လိုလာမယ် မသိ
အန်တီအေးရေ ငယ်သူဆိုတော့ စိတ်ကထက်တော့ သိပ်မတွေးပဲ ရူးရူးမိုက်မိုက်လုပ်ခဲ့ဖူးတာ ကံကောင်းလို့ မသေတယ်။ ဇာတ်သိမ်းလေး ဘယ်လိုလာမယ် မသိဘူး။
ချစ်သော..ကေ ဘာများဖြစ်နေပါလိမ့်နော်…လာရှာတိုင်း ကေ့ကို မတွေ့သေးဘူး….